Tag: ruvara | Martech Zone
Kushambadzira Psychology: Kufunga Kwacho Kusingaenzane Kunzwa Kunokanganisa Yako Kushambadzira Mhinduro Mitezo
China, November 1, 2018 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Douglas Karr
Wepakati mutengi anoratidzirwa kuwanda rakakura reshambadziro maawa makumi maviri nemana. Taenda kubva paavhareji munhu mukuru akafumurwa kushambadziro mazana mashanu pazuva muma24s kusvika kumazana mashanu ezishambadziro pazuva nhasi Izvozvi zvingangoita mamirioni maviri kushambadzira pagore zvinoonekwa nemunhu wepakati! Izvi zvinosanganisira nhepfenyuro, terevhizheni, kutsvaga, zvemagariro enhau, uye kushambadzira kushambadzira. Muchokwadi, 500 tiririyoni ekuratidzira kushambadzira kunoratidzwa online gore rega rega Sezvo isu tiri pachena
Iyo Sayenzi Yekutengesa Kushambadzira
Mugovera, Kubvumbi 14, 2018 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Douglas Karr
Mwedzi uno tanga tine 2 mafotokoti nevatengi, vhidhiyo yedrone, uye vhidhiyo yehutungamiriri vhidhiyo… zvese kuti zvigadzirise nzvimbo dzevatengi vedu uye zvemukati. Pese patinotsinhanha vhidhiyo yemavhidhiyo uye vhidhiyo pamasaiti evatengi uye nekuitsiva nemifananidzo yekambani yavo, vashandi vavo, uye vatengi vavo… inoshandura saiti, uye kuita pamwe nekushandurwa kunowedzera. Icho chimwe chezvinhu zvinyengeri izvo zvatisingazive isu patinoona saiti, asi
Kumhara Peji Optimization Matipi ayo Anowedzera Kutendeuka Mitengo
Mugovera, June 25, 2016 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Douglas Karr
Hapana mubvunzo kuti kugadzirisa mapeji ekumisa chinhu chakakosha kune chero mushambadzi. Email maMonks akaisa pamwechete iyi yakazara interactive infographic pane yekumhara peji yekugadzirisa matipi ayo anotyaira zviyero zvinoyerwa. Heano mamwe matanho akakura ane chekuita nekumhara peji rekugadzirisa. Mutungamiri Barrack Obama vakasimudza imwezve $ 60 miriyoni nerubatsiro rweA / B kuyedza Mapeji ekumhara marefu anokwanisa kuburitsa anosvika mazana maviri nemakumi maviri ezviuru zvinotungamira kupfuura pamusoro penzvimbo yekudaidzira-kuita-220%.
2016 Webhusaiti Dhizaini Maitiro Ekufunga Usati Wagadzira Yako Saiti
Chipiri, January 12, 2016 Chipiri, January 12, 2016 Pamela Webber
Isu takaona makambani mazhinji achienda kune yakachena, yakapusa ruzivo kune vashandisi vewebhusaiti. Kunyangwe iwe uri mugadziri, musimudziri, kana iwe uchingoda mawebhusaiti, iwe unogona kudzidza chimwe chinhu nekutarisa maitiro avari kuzviita. Gadzirira kugadzirira! Mifananidzo Kusiya kumashure kwekutanga, mazuva ane hunyanzvi ewebhu, ayo aipenya nemagetsi anopenya, mabara ehupenyu, mabhatani, mifananidzo uye hamsters yekutamba, kuchangamuka nhasi kunoreva kugadzira zviito zvinopindirana, zvinopindura zviito izvo.